"विषाक्त चक्की" – NEPÆNGLISH
घटना र विचार, जानकारी, विश्व
यो “विषाक्त चक्की” कुनै रोग निदानको निम्ति खाने चक्की नभै, अमेरिकी सरकार र उसका राजदूतावासका कूतनैतिक गोप्यता भएका कागजात हुन् । हालसालै विकिलिक्सका संस्थापक तथा सम्पादक जुलिएन असान्जले अमेरिकी सरकारलाई दिएको कडा चुनौती हो । उनले आफूलाई मार्ने, हानी पुर्‍याउने, झ्यालखानामा राख्ने वा विकिलिक्सलाई नष्ट पार्ने चेष्टा गर्‍यो भने ती सबै गोप्य सुचनाहरू विश्वसामु प्रवाह गर्छु भनेका छन् । उनले भनेजस्तै ती गोप्यता भने कसरी भङ्ग गर्ने गर्ने हो, त्यो आउने दिनहरूको घटना र समयक्रमले बताउने छ ।
असान्जले उनिसँग भएका १.७ गिगाबाइट क्षमताका ती गोप्य फाइलहरूलाई २५६-विट की इन्क्रिप्सन गरि कसैले निष्क्रिय पार्न नसकिने गरि सुरक्षा कवज लगाइदिएका छन् । त्यति मात्र होइन, उनले ती सम्पूर्ण फाइलहरू आफ्ना विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूलाई पनि बाँडेका छन् । साथै, ती फाइलहरू संसारकै ठूला छापा संचारमाध्यम गार्जिएन, न्यू योर्क टाइम्स् जस्ताहरूलाई पनि दिएका छन् । उनिहरुले लामो समय खोज र विचार गरेर मात्र कुन छाप्ने, कुन नछाप्ने भनेर छुट्याएर मात्र छापेका हुन् ।
फाइल कसरी सुरक्षित ?
विश्वकै शक्तिशाली मानिने देशमा धेरै नै तिक्षण बुद्धि भएका ह्याकरहरू प्रशस्तै नभएका होइनन् । तर किन आज सम्म ती फाइलहरू कसैले छुन नसकेका हुन् त ? सामान्यतया कुनै पनि फाइल ५६-विट की इन्क्रिप्ट हुन वित्तिकै सुरक्षित मानिन्छ । असान्जले २५६-विट की इन्क्रिप्ट गरेर नै अहिलेसम्म फाइलहरू सुरक्षित रहन सकेका हुन् । ती इन्क्रिप्ट गरिएको कोड मात्र पत्ता लगाउनतिर लाग्ने हो भने, कम्प्युटर विषेशज्ञहरूलाई पनि असंख्य वर्ष लाग्ने अनुमान लण्डनस्थित कम्प्युटर सुरक्षासम्बन्धि विषेशज्ञ बेन लरीले बताए । यसर्थमा, ती फाइलहरू चोर्न, निष्क्रिय पार्न, वा नष्ट पार्न असम्भवप्राय: नै रहेछ । त्यो कुरा अमेरिकाकै कम्प्युटर सुरक्षा विषेशज्ञहरूले स्वीकार गरिसकेका छन् । केहीगरि असान्जले आफूखुसी वा उसका विश्वासयोग्य मध्येका कसैले पैसामा वा ज्यान जाने डरले ती सुरक्षितरूपमा संचित फाइल अरूलाई नदिएसम्म कसैको केही नलाग्ने निष्चित नै देखिन्छ ।
स्मरनिय होस्, असान्जलाई पक्रिन र विकिलिक्ससँग सम्बन्धित सबै कुरालाई दवाउन कोशिस गर्दै गरेको अमेरिकाले माथि उल्लेखित ठूला संचारमाध्यमहरूको विरुद्ध एक शब्द पनि चुइक्क बोलेका छैन ।
जाँदाजाँदै एउटा कौतुहलता छोडेर जाँदैछु । ती फाइलहरूमा के-के मात्र छन् होला ? युद्ध सम्बन्धि बाहेक त्यस्तो कुरा के छ जुन कुरा अमेरिकी सरकारको निम्ति “विषाक्त चक्की” नै भैदियो ?
Satya Maharjan December 10, 2010
Previous Previous post: विकिलिक्सलाई छद्मभेषीहरूको समर्थन, एक नेपाली पनि
Next Next post: विकिलिक्समा भारतले अमेरिकालाई नेपालको कुरा लगाउदैं